Year of sales – AutoMyanmar
Posts tagged with: Year of sales
Honda Malaysia အနေနဲ့ ၂၀၁၇ အတွင်းမှာ Vehicle ပေါင်း ၁,၀၈၉၅၁၁ ကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သိန်းကျော်ရောင်းချနိုင်မှုဟာ Honda Malaysia အနေနဲ့တော့ စတင်တည်ထောင်တဲ့ခုနှစ်၂၀၀၃ ကစပြီးကြည့်ရင် ပထမဉီးဆုံးအကြိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ မှာတုန်းက ၉,၁၈၃၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ နဲ့ ၂၀၁၇ ရဲ့ရောင်းချနိုင်မှုမှတ်တမ်းကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Honda Malaysia Managing Director and Chief Executive Officer, Mr. Toichi Ishiyama said, “The year 2017 truly was remarkable for Honda Malaysia. At the beginning of 2017, we challenged ourselves […]
တစ်နှစ်အတွင်း တိုးမြင့်လာတဲ့ MITSUBISHI MOTORS ရဲ့ရောင်းအားအခြေအနေ!
Mitsubishi Motor North America (MMNA) အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ ၂၀၁၇ အတွင်းရရှိခဲ့တဲ့ ရောင်းအားရလဒ်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းအငယ်ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ တစ်နှစ်လုံးရဲ့ Mitsubishi ရဲ့ရောင်းအားစုစုပေါင်းကတော့ ၁၀၃၆၈၆ အထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်နဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် ၇.၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကစပြီး vehicle ပေါင်း ၁ သိန်းကျော်အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဟာပထမဉီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဒီဇင်ဘာလတစ်လရဲ့ရောင်းအားဟာ ၈၅၀၁ အထိရှိနေပြီး အရင်နှစ် ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလနဲ့ယှဉ်ရင် ၁၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရောင်းအားတွေကအရင်နှစ်ကထက်သိသိသာသာတိုးတက်လာတာကြောင့် MITSUBISHI အတွက်တော့ စိတ်ကျေနပ်စရာပါပဲ။ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလရဲ့ ရောင်းအား ၈၅၀၁ ထဲမှာရောင်းအားအကောင်းခဲ့ဆုံး vehicle ကတော့ Mitsubishi ရဲ့ adventurous Outlander Sport ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Outlander Sport ရဲ့ရောင်းအားဟာဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ၃၆၇၈ […]
Mitsubishi, Outlander Sport, Year of sales